XOG: Xubnaha dhalashada Mareykanka heysta ee lacagta Daamujadiid qeybinaya. | Warbaahinta Umada Soomaaliyeed	Sunday, April 23rd, 2017	Home
XOG: Xubnaha dhalashada Mareykanka heysta ee lacagta Daamujadiid qeybinaya.
Feb 7, 2017 - jawaab	Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo Taliye ciidan oo heysta dhalashada dalka Mareykanka ayaa waxaa ay si cad u jabiyeen digniintii horey uga soo baxday dowlada Mareykanka,taasi oo aheyd in qofkii dhalashada dalkooda ee ka qeybgala musuqmasuqa doorashada Soomaaliya ay la tiigsan doonaan sharciga dalka Mareykanka. Xubnahan oo kala ah Xildhibaan Sadaq Abdikariim, Xildhibaan Sadiq Warfaa, Xildhibaan Ali Balcad, Xildhibaan Mohamud Abdirahman Beenebeene iyo Taliye Abdilahi Macalin Nuur ayaa waxaa ay kooxda Daamujadiid u xil saartay qeybinta lacagaha laaluushka ah ee loo qeybinayo baarlamaanka. Taasi oo ay ka dhex bilaabeen xarumaha ay ka wadaan ololahooda. Waxaana si aan qarsoodi aheyn u sheegayaan inay codka baarlamaanka ku iibsanayaan lacagta ay heystaan, taasi oo meel ka dhac weyn ku ah dowlada la filayo in la dhiso. Sidoo kalana danbi weyn ka ah dhanka dowlada Mareykanka.
Shaqsiyaadka dhalashada USA heysta ee lacagta Daamujadiid qeybinaya!!
Xildhibaanada oo laba horey agaasimayaal uga ahaa madaxtooyadda ayaa wax cusub ku aheyn inay ku shaqeeyan nidaamka musuqmasuqa iyo laaluush bixinta, waxaase hadda kusoo biiray Sadiq Warfaa iyo Mohamud Abdirahman Beene-Beene oo ladaba ku cusub saaxada siyaasada Soomaaliya. Waxaana sidoo kale madax ka yihiin guddi baarlamaan oo ay sameysteen Daamujadiid, kuwaasi oo aan muuqaalo idin ka heyno.
Dhinaca kale, Abdilahi Macalin Nuur waa askari ku gaaray 2 sano darajada GENERAAL iyo hoggaanka saadka ciidanka. Sababtana ay tahay inuu qaraabo dhaw la yahay Xasan Shiikh Maxamuud, islamarkaana uu ku jiro kaadiriinta u hoggaansan musuqmasuqa Daamujadiid.
Dowlada Mareykanka ayaan la ogeyn waxa ay ka qaban doonto xubnahan dhalashadooda geysta ee sida muuqata lugaha ula galay laaluush iyo xoojinta musuqmasuqa, maadaama ay horey u sheegtay inay muwaadiniinta heysta dhalashadeeda la tiigsan doonto sharciga Mareykanka.